အောင်ဒင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
အခန်း ၆ - မတ်လတော်လှန်ရေး (၂) - Aung Din
အောင်ဒင် - လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် မျိုးစောင့်ဥပဒေများ (ဂ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၉ )
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၇)
Aung Din - မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၀)
အောင်ဒင် - ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!!
အောင်ဒင် – အပိုင်း (၆၉) လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် ကျူးကျော်အာဏာသက်ရောက်မှု
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၂၀၄၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၂၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၉) ...
အောင်ဒင် – ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! (၅)
(ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၄) ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! (၅) The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာပြန်သူ၊ အောင်ဒင်) အပိုင်း...
အောင်ဒင် – အပိုင်း (၆၈) လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှာ ၂၀၃၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၂၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၈) အောင်ဒင်၊...
အောင်ဒင် – အမုန်းတရားများနှင့် တိုင်းပြည်
အမုန်းတရားများနှင့် တိုင်းပြည် အောင်ဒင်၊ ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၄ (၁) တစ်ချိန်ကတော့ ဒီမြေမှာ ပန်းတွေဝေခဲ့တာပေါ့…။ အပြာဖွေးဖွေး ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတွေ၊ ရွှေရောင်ရဲရင့် နွေကို ငံ့လင့်တဲ့ ပန်းတွေ၊ နီနီရဲရဲ ညီညွတ်လက်တွဲပန်းတွေ…။ အခုတော့...
အောင်ဒင် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် အောင်ဒင် ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၄ (ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၂၀၂၊ ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ...
အောင်ဒင် – ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မှန်ကန်စေခြင်း
(ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၄) ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာပြန်သူ၊...
အောင်ဒင် – အပိုင်း (၃) ဒီမိုကရေစီ ပန်းနာရင်ကြပ်ဖြစ်ခြင်း
(ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၄) ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာပြန်သူ၊ အောင်ဒင်) အပိုင်း...
အောင်ဒင် – လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် မတော်မတရား ကြွယ်ဝကြသူများ
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၉၊ ဇွန်လ ၅၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၂၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၆) အောင်ဒင်၊ ဇွန် ၁၂၊...
အောင်ဒင် – နွေတစ်ညမှ အစပြု၍
နွေတစ်ညမှ အစပြု၍ အောင်ဒင်၊ ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၄ အသက်ကလည်း ၅၀ ပြည့်ခဲ့ပြီး အလုပ်လည်းမရှိတာမို့ ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းအချို့မှာ ဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးနေရင်း ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဘဝအထုပ္ပတ္တိကို အပိုင်း (၃)...
အောင်ဒင် – လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် မျိုးစောင့်ဥပဒေများ (ဂ)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၈၊ မေလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈-၂၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၅) ...
အောင်ဒင် – အပိုင်း (၆၄) လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် မျိုးစောင့်ဥပဒေများ (ခ)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၇၊ မေလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၄) ...
အောင်ဒင် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၂)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၅၊ မေလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့်...
အောင်ဒင် – ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!!
(ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁၊ မေလ ၂၀၁၄) ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာပြန်သူ၊ အောင်ဒင်)၊ မေ ၁၅၊...
အောင်ဒင် – မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၆) နှင့် (အပိုင်း ၇)
(တူမောရိုးသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၈၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၄) (တူမောရိုးသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၉၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်၊...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၂၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၁) အောင်ဒင်၊ ဧပြီ...
Aung Din – ကာကွယ်ရေးအသုံးစားရိတ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(တူမောရိုးသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၇၊ ဧပြီလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၃၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၅) ကာကွယ်ရေးအသုံးစားရိတ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ...
Aung Din – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၀)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၁၊ ဧပြီလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၀)...
Aung Din – မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၄)
(တူမောရိုးသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၆၊ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၄) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၄) အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဏဆိုင်ရာ မူဝါဒ ...
Aung Din – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ၅၉
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၉၀၊ မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ၅၉ အောင်ဒင်၊ ဧပြီ...
Aung Din – ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းမူဝါဒ (Income Tax Policy)
(တူမောရိုးသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၅၊ မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၃၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၃) ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းမူဝါဒ (Income Tax Policy) အောင်ဒင်၊...